Pavel Nedved oo ka digay halista kaga imaan karta kooxda Ajax wareega siddeeda ee Champions League – Gool FM
(Europe) 15 Maarso 2019. Madaxweyne Ku xigeenka kooxda Juventus Pavel Nedved ayaa ka digay halista ka imaan karta Ajax Amsterdam, kadib markii ay isku beegmeen isku aadkii wareega siddeed dhamaanta tartanka Champions League ee maanta la sameeyay.
Pavel Nedved ayaa kadib isku aadkii wareega siddeed dhamaanta tartanka Champions League ee maanta la sameeyay wuxuu u sheegay shabakada Sky Sports ee Italia:
“Waxaa la ciyaari doonaa 2 kulan ee qurux badan, waan la dhacay Ajax kulankii ay la ciyaareen kooxda Real Madrid, sidaas daraadeed waa inaan ka taxadarnaa”.
Cristiano Ronaldo ayaa la rajeynayaa in loo diido ciyaarista kulanka Ajax, kadib dabaal dagii uu ku hor sameeyay jamaahiirta kulankii Atletico Madrid, laakiin Nedved ayaa rajeeyay in arintaas aysan dhicin.
“Ciyaartoyda waxay heysteen labo kulan kale ee Champions League ah, waana inaan ku wajahnaa kooxda Ajax si xamaasadeysan, kama baqayo in la ganaaxo Cristiano Ronaldo”.
“Waxay ahayd dhacdo gudaha garoonka ah, waxay ahayd tartan, kadib weerarkii uu kala kulmay taageerayaasha kooxda Atletico Madrid”.
Intaas kadib madaxweyne Ku xigeenka kooxda Juventus Pavel Nedved ayaa wuxuu ka hadlay tababare Massimiliano Allegri wuxuuna yiri:
“Wuxuu ku hogaaminayaa 18 dhibcood horyaalka, islamarkaana wuxuu ciyaarayaa tartanka Champions League, wuxuuna na dhigay halka aan dooneyno”.
“Waan dhaawici karnaa kooxda Barcelona” - Chris Smalling